Ngaba i-SEO Inceda Ukukhuthaza I-Bhishini? Impendulo Kusuka kwiNgcali yeSemalt
Impendulo elula ngolu hlobo kukuba inceda ukuphucula ukubonakala kwesosiza kwi-intanethi ngabaphulaphuli abajoliswe kuyo. Uninzi lwabantu luqala ukufumana iimpahla kunye neenkonzo ezifuna i-intanethi ngokwenza imibuzo kwi iinjinjini . Ngoko ke, ukuba enye iyafana neendlela zokukhangela, i-website ibonisa uluhlu lweziphumo. Kukho ezinye iindlela zokuthengisa i-brand usebenzisa i-imeyile, i-media media, kunye nezipapasho ezivela kwiTV okanye kwi-rediyo. Ukwahlukana kwe-SEO kwezinye iifom zokuthengisa kukuba umnini-mhlaba ufumana ukuvakalisa iimveliso zabo kunye neenkonzo kubantu abazifunayo. Kwakhona, i-SEO ivumela abaphulaphuli abajoliswe kuyo ukuba balawule oko bakufumeneyo, oko bafuna, kwaye xa befuna - ninos fotografias.
Nangona iingcali zithi akukho ziqinisekiso xa kuziwa kwi-SEO, kubalulekile ukubandakanya umqeqeshi we-SEO othengisayo njengoko ukwandisa ithuba lokuphumelela nokuphucula i-ROI.
Akunandaba nokuba ubani ufuna ukusebenzisana nomthengisi, okanye ukuqesha umqeshwa we-SEO, u-Alexander Peresunko, uMphathi weNtengo kaMthengi we-16 (Semalt , uchaza izinto ezimele zijonge:
1. Amava-mava kwiMpumelelo yokuphunyezwa
Okwangoku, kukho abantu abaninzi kwimarike abathetha okanye baqonde ulwimi lwe-SEO. Nangona kunjalo, ayikho indlela eyenziwa yoshishino okanye indlela echongiweyo yokuvavanya ukuba umntu akayiyo enkulu kwi-SEO njengoko ibango. Omnye unokuthatha ithuba lokucela umviwa wemimiselo yangoku yamagama aphambili, okanye iinkampani zangaphambili ezifuna ukubonelela ngokuthumela kubathengisi. Ekugqibeleni, inkampani iphela kunye nomntu oye wenza ii-SEO ngezihlandlo ezininzi, kwaye kungekhona ngabanye abathi banokwazi ukuhamba ngayo.
2. UJack wezoBuchule bonke abasebenzi
abathengi banqwenela ukuziqhenya ngokuba yingcali kuzo zonke izinto ezibandakanya ukuthengiswa kwegedijithali .Izihlandlo ezingaphezulu kunjalo, ezininzi iingcali ze-SEO zinalo Ngaphezulu koko, iinkampani ziya kufumana inzuzo yokuba nomntu onobubanzi obuninzi bobugcisa bokudibanisa, obuxabisekileyo kubo. Xa kuziwa ekuqeshweni komntu kwi-niche ye-32 ye-SEO yokuthengisa , kuya kuba bulumko ukuqesha umntu ojolise ngokucacileyo kuyo kuba banokuba nezandla ezininzi kumava ukwenza oko kanye umnini-mhlaba onqwenela ukufeza.
3. Iingcali ezinikezela iziqinisekiso
Abathengisi abaninzi kunye neengcali ezizimelayo bathetha abathengi ukuba akukho ziqinisekiso xa usebenzisa i-SEO. Liyinyaniso ngokwenene ngokokuba i-intanethi ingavala, okanye iinjinjini zinyamalale. Nangona kunjalo, ezi zinto zingenakwenzeka. Ngaphandle kwezihlandlo ezingaqhelekanga ezifana nalezi, kukho izizathu ezininzi zokuba iingcali zifanele zinike izilindelo ezifanelekileyo kunye neziqinisekiso kubaxhasi babo. Ngaloo ndlela, xa ufuna umthengisi ogqithisileyo, unyuse ukusebenza kunye nomntu ofuna ukuzenza njengokuba befuna iziqinisekiso kunye nokubuyiswa kwezimali.
4. Ngokuxhomekeke kwiingcamango zabanye abantu kunye neengcamango
Into eyona nto engayenzayo kukuba kuqeshwe umthengisi othembela kwiinkokeli zokucinga. Akunjalo ukuba abaxabisekileyo, kuphela ukuba abanini kufuneka bahlale beqaphele. Ekubeni izixhobo kunye nezixhobo ezifumanekayo zinokwanele ukukwazisa ngendlela engcono yokuphuma ngaphandle kwegama eliphambili, akunakuncika ukuba uthembele kwabanye abantu ukuba kukho iinyaniso.
Musa ukuhlala kuyo nayiphi na enye ngaphandle kweengcali xa kuziwa kwi-SEO. Ukuba umntu akanakukwazi ukuzithengela, khangela isicwangciso esincinci sokuthengisa. I-SEO ivelisa iindleko ezixhamlayo xa kunikwa ixesha. Khumbula iingongoma ezine ngasentla xa ukhetha umthengisi.